काँग्रेसलाई गिज्याउँदै नेविसंघ ! | देश परदेश Desh Paradesh
नेपाली मिति: ०८:१९:३१ बिहान २०७८ माघ ९ गते, आईतवार
काँग्रेसलाई गिज्याउँदै नेविसंघ !
९ आश्विन २०७१, बिहीबार
श्रीधर पौडेल, काठमाडौं, असोज १०– विधानमा भएको ‘हरेक दुई बर्षमा अधिवेशन हुने’ व्यवस्थालाई व्यवहारमा अभ्यास गरिएको हुन्थ्यो भने विसं २०६६ सालयता नेपाल विद्यार्थी संघले तीनवटा नयाँ अध्यक्ष पाईसकेको हुन्थ्यो । तर, २०६४ साल जेठमा दुई वर्षका लागि प्रदीप पौडेललाई वैधानिक अध्यक्ष चुनेयता नेविसंघले अर्को निर्वाचित अध्यक्ष पाएको छैन । नेविसंघ हाल पनि तदर्थ समितिकै भरमा चलिरहेको छ । २०६९ माघमा ६ महिनाका लागि भनेर पार्टीले टीका लगाएर बनाएका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले नै हाल नेविसंघको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०६४ साल जेठमा चितवनमा नेविसंघको १० औं अधिवेशन भएको थियो । सो अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदीप पौडेल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काँग्रेस केन्द्रीय समितिले भंग गर्न खोजेपछि असन्तुष्ट भएका पौडेलले राजीनामा दिएका थिए ।
लामो समयसम्म तदर्थ समितिकै भरमा चलिरहेको संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यसअघि पटक–पटक मिति तोकिएपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुँदै आएको छ । यसअघि २०७० भदौ, पुस र २०७१ असारका लागि संघको अधिवेशनको मिति तोकिएपनि हुन सकेनन् । पछिल्लो पटक गएको भदौ २९, ३० र ३१ गतेका लागि तय भएको अधिवेशन पनि स्थगित भयो । कात्तिक ३० देखि मंसिर २ गते सम्मका लागि पाँचौपटक मिति तय गरिएको छ ।
प्रजातन्त्र र विधिको शासनको वकालत गर्ने पार्टीको भातृ संगठनको अधिववेशन बर्षौं हुन नसक्नुले नेपाली काँग्रेसलाई नै गिज्याईरहेको छ । तिथी मिति घोषणा गरेर पनि अन्तिम समयमा आएर अधिबेशन स्थगित गर्ने पुरानो प्रकृया यसपटक पनि दोहोरियो ।
संघको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका नीलकण्ठ रिजाल यसले विधि र प्रकृयालाई नमान्ने गुटको रुपमा संघलाई परिभाषित गर्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘जिल्लामा जिल्ला समिति र केन्द्रमा केन्द्रिय समितिको हस्तक्षेपले नै पटक पटक अधिबेशन स्थगित भएको हो ।’ उनी भन्छन् ‘पार्टिको आन्तरिक समस्या मात्रै हैन, लामो समय देखि तदर्थवादमा चलेको संघ भित्रैको बेथितीले पनि यसलाई सघाएको छ ।’
कोईराला र देउवा खेमामा बाँडिएको पार्टी एक त भयो तर कार्यकर्ता र भातृ संगठनमा पार्टीको एकता गराउन नेताहरु असक्षम भएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो क्यान्सर त निको पारे तर पार्टीका भातृ संगठनमा लागेको घाउले बनाएको क्यान्सरको भेउ नै नपाएको नेविसंघका पुराना नेताहरु बताउँछन् ।
नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष गुरु घिमिरे पार्टी एकिकरण पछि पनि कायम रहेका समानान्तर समितिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नै यो समस्या आएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन् ‘यसले संस्थाहरुलाई कमजोर मात्रै होइन, नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध पार्छ, कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ र समग्र पार्टी संगठनलाई कमजोर पार्छ ।’
नेविसंघको नयाँ नेतृत्वका लागि एक दर्जन भन्दा धेरै आकाँक्षी छन् । देउवा पक्षबाट नैनसिंह महर बलिया उम्मेद्वार देखिएपनि संस्थापन पक्षबाट को आधिकारिक हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनु पनि अधिवेशन हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । आफ्ना तर्फबाट बलिया उम्मेद्वारको टुङ्गो नलागुञ्जेल बरु कर्णलाई नै राख्दा फाईदा हुने संस्थापनको बुझाई छ ।
चार पटकसम्म स्थगित भएर पाँचौ पटकका लागि तय भएको मितिमा संघको अधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वस्त आधार देखिएको छैन । किनकी यस अघि जुन कारणले अधिवेशन हुन सकेको थिएन त्यसको उचित समाधानको विधि निर्माण काँग्रेसका लागि चुनौतिपूर्ण विषय हो ।
विद्यार्थी विभागका संयोजक नविन्द्रराज जोशी संघको नेतृत्व निर्वाचनबाटै होस् भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताउँछन् । ‘यस अघिको भन्दा यस पटक स्थगित हुनुको खास कारण चाँहि समयमा नामावली प्राप्त नभएरै हो’ जोशी भन्छन् ‘नेविसंघ भनेको पार्टीको भावी पुस्ता तयार गर्ने निकाय हो । नेतृत्वका लागि उम्मेद्वार त भए तर नयाँ विचार र नयाँ धारणा नै तयार भएन ।’
अहिलेसम्म सुर्खेत, रुपन्देही, चितवन, कास्कि र धनुषाको अधिवेशन प्रकृया नै शुरु भएको छैन । ९ जिल्लामा रहेका विभिन्न क्याम्पसहरुको ईकाई समितिको अधिवेशन पनि हुन सकेको छैन । बाँकी अधिवेशनको प्रकृया कहिले शुरु हुन्छ र कसरी नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने कुरा नै यतिखेरको मुख्य चुनौति हो । यसमा पार्टी भित्रको कलह र त्यसको ब्यवस्थापनको विधि के कसरी तय गरिन्छ भन्ने कुराले नै संघको नयाँ कार्यसमिति चयनको बाटो तय हुने छ ।